Semalt: 3 Torohevitra momba ny fomba fampiasana ny tenimiafina - Torolalana ho an'ny mpandahatra
Rehefa eritreretinao ny SEO, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia teny fanalahidy .
Na izany aza, ny fahafantarana ny antony manosika azy, ny fomba fampiasana azy ireo , ary ny tsy tokony hatao dia lafiny manan-danja mamorona votoaty mahatalanjona izay mendrika tsara ho an'ny milina fikarohana.
Koa satria ny teny fanalahidy handika ny isan'ny mpikirakira mitady ny vokatra na ny fampahalalam-baovao manokana, amin'ny maha mpanoratra, ny lahatsoratra dia tokony hifantoka amin'ireo mpampiasa sy hanome fahafaham-po azy ireo.2) Ahoana anefa no ahazoanao ny mombamomba anao?2) Avelao ny seminera hanomboka amin'ny tanjona kendrin'ny mpanjifa na ny fikasana hikaroka.
1. Fanontana fanontana
Mieritreritra ny mpihaino anao ianao? Ny faniriana dia tena manakiana rehefa mifidy raha hifandray amin'ny fitaonao izy ireo ary tsy hamaky na hiharatsy na hiala aminy - top companies with long term care insurance.
Misy sokajy telo misy ny fanontanianao:
Hifantoka amin'ny transakta sy ny fampahalalam-baovao izahay satria izy ireo no roa mila ny famoronana votoaty.
Ny fangatahana fampahalalana araka ny soso-kevitra dia manondro olona iray mitady fampahalalana manokana raha toa ka 3) ny fifampiraharahana dia manondro hetsika iray tiany horaisina.
Samy hafa ny hividianana vokatra, fampidinana rindrambaiko na mozika, ary ny toy izany.
Katsaho ny hahatakatra raha mikaroka fampahalalana na vokatra ny mpanjifanao.
Ohatra, Ny vokatra tsara indrindra amin'ny vokatra volo na Mividy efitrano LG tokona dia maneho olona iray izay te hividy entana Ny fomba fanaovana latte na Jet lag dia manondro olona mitady ny vaovao.
Raha manana izany fahalalana izany dia hanampy anao hanamboatra ny asanao amin'ny fitadiavana ny filàna manokana ilainao amin'ny tsenanao.
2. Fanondroana ny tenimiafina
Na dia nanova ny fifantohan-tsainy bebe kokoa aza i Google amin'ny famoahana vaovao sarobidy ho an'ireo mpampiasa ary tsy miorina amin'ny votoaty mifototra amin'ny teny fanalahidy ihany, dia mbola mijanona ho ampahany amin'ny SEO ihany izy ireo.
Mitady azy ireo hatrany ny fitaovam-pitadiavana mba hahafantarana ny momba ny lahatsoratra..
Ny fomba tsara indrindra hanaparitaka ny teny fanalahidy dia voalohany amin'ny lohateninao, satria izany dia ahafahan'ireo mpamorona fikarohana hahafantatra ny momba ny lahatsoratrao. Ampidiro ao amin'ireo karazana 50 voalohany ao amin'ny lohateninao.
Faharoa, ataovy ho ampahany amin'ny dikantsarinao izy ireo ary farany, zarao amin'ny alalan'ny lahatsoratrao amin'ny endriny. Don? T mahavita izany. 2) Ataovy azo antoka fa milamina ny asanao. 2) Tadidio fa ny tanjonao dia ny hanorina mpanatrika.
Amin'izany fomba izany dia hitazona ireo mpanjifanao ho avy indray ianao.
Zavatra roa tokony hotadidinao ato, fampahalalana mahasoa sy fanatsarana.
3. Sokajin-teny matevina
2) Ny iray amin'ireo fahadisoana mahazatra indrindra dia fampiasana tafahoatra ny teny fanalahidy. Izany dia fantatra amin'ny fikarakarana.
Google dia mitebiteby amin'ny teny fanalahidy ary manamarika izany ho toy ny spam, na manome sazy ho azy. Amin'ny tranga ratsy kokoa, tranonkala dia fandrarana .
Raha mpanoratra ianao, ny zavatra farany tianao dia ny fanararaotana ny mpanjifa noho ny lahatsoratra nosoratanao.2) Ahoana no hahalalanao raha resinao izany? Eny, 1-3% no fitaratry ny soso-kevitra voatondro ny manam-pahaizana semeur .
Maro ny fitaovana an-tserasera azonao ampiasaina mba hanatrarana izany.
Ny iraka ataonao dia ny hamolavola asa tsara izay tsara sy mahasarika olona. Ianao tsy te hanao ny ezaka rehetra ataonao mba hidina ny fisotroana.
Mifantoka bebe kokoa amin'ny fanomezana ny fampahalalana amin'ny Semalt manager ary hahomby ianao.